ဟာ Crush အနားကပ်ခွင့်ရဖို့တောင် ခက်ခဲနေပါတယ်ဆိုမှ ဘာအကြံဆိုးကြီးလဲလို့ မမေးပါနဲ့။ အရာရာတိုင်းမှာ စိတ်ပညာဆိုတာရှိပါတယ်။
အော် Crush Crush …… ငါ့ကို တယ်လည်း ချေနိုင်ပါ့လား၊ ဘယ်လိုစွမ်းအားတွေများ ပိုင်ဆိုင်ထားသလဲဟင်လို့ မေးခွန်းထုတ်နေရသူတွေရှိလား။ ဒါဆို သူတို့အတွက် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို သယ်ဆောင်လာပါပြီ။ ဘာတွေများဖြစ်မလဲ။ ကဲ …. ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
၁။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ပါ။
အရင်ဆုံး ကိုယ့် Crush ရဲ့ အကြိုက်ကို ကိုယ်ကသိထားဖို့လိုပါတယ်နော်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Crush တို့မည်သည် ဘယ်လောက်ပဲ ချေမိုးတတ်ပါစေဦး၊ သူ့ကို Crush နေတဲ့သူဆိုတာနဲ့ အရင်ဆုံး အဲ့ဒီလူရဲ့ အသွင်အပြင်ကို တစ်ချက်ဖမ်းရှိုးတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ သူတို့ အဲ့ဒီလို တစ်ချက်ဖမ်းရှိုးတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်က သူတို့အကြိုက်ပုံစံဖြစ်နေဖို့ လိုအပ်တာပေါ့။ တကယ်လို့ ကိုယ်က သူတို့အကြိုက်ကို မသိနိုင်သေးဘူးဆိုရင်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ထားပြီး သူတို့ကိုယ့်ကို မသိမသာအကဲခတ်တဲ့အချိန်မှာ ကြည့်ပျော်ရှုပျော် လူတန်းစားစာရင်းဝင်အောင်နေပါ။ တိုက်ဆိုင်တယ်ဆိုလည်း ကိုယ့်ကိုရှိုးနေတဲ့အချိန်မှာ မျက်လုံးချင်းဆုံရင်း ဖမ်းစားနိုင်အောင် ကြိုးစားကြည့်ပါ။
၂။ ပြုံးပါ။ နှစ်လိုဖွယ်ပြုံးပါ။
ကိုယ့်အပြုံးက ငါးခူပြုံးလို ဖြစ်တတ်လား၊ ပြောင်စပ်စပ်ဖြစ်သွားနိုင်လားဆိုတာကိုတော့ မှန်ထဲမှာ အရင်ပြုံးကြည့်ဦးနော်။ အဲ့ဒီအပြုံးကိုလည်း အဆင်ပြေအောင် လိုအပ်သလို နှုတ်ခမ်းကရွဲ့နေလား၊ မျက်လုံးကစောင်းနေလားဆိုတာကို အလိုင်းမင်းအရင်ချိန်ကြည့်ဦး။ ပြီးရင် သူနဲ့တွေ့တာနဲ့ သေချာကြည့်ပြီး ချိုမြိန်တဲ့အပြုံးလေးတစ်ပွင့် ပစ်လွှတ်လိုက်ပါ။ တော်ရုံတန်ရုံ Crush ဘယ်ခံနိုင်ပါလိမ့်။ ကိုယ့်အပြုံးက သူ့ဆီဓာတ်ကူးပြီး ပြန်ပြုံးပြမှာ အသေအချာပဲ။ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ ကိုယ်က အခြေအနေကောင်းဖို့ နည်းနည်းလေးမျှော်လင့်ချက်ရှိလာပြီပေါ့။
၃။ Crush ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ပြေးလုံးပစ်လိုက်၊ ဘာမှမတွေးနဲ့။
ပြေးလုံးပစ်ဆိုတာ သိတယ်မဟုတ်လား၊ နပန်းလုံးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်။ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ Crush ကို Crush ဖို့ဆိုတာက ဘေးက နည်းနည်းလေး မြှောက်ထိုးပင့်ကော်လေးရှိမှ အဆင်ပြေသားမဟုတ်လား။ ဒီတော့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အဆင်ပြေအောင်ပေါင်း။ သူ့ကို သဘောကျတဲ့အရိပ်အယောင်တွေပြလိုက်။ နောက်ဆို ကိုယ်နဲ့ ကိုယ့် Crush ကို မြင်တာနဲ့ သူတို့က ဘေးတီးပေးဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေပါလိမ့်မယ်။
ဟာ Crush အနားကပ်ခွင့်ရဖို့တောင် ခက်ခဲနေပါတယ်ဆိုမှ ဘာအကြံဆိုးကြီးလဲလို့ မမေးပါနဲ့။ အရာရာတိုင်းမှာ စိတ်ပညာဆိုတာရှိပါတယ်။ အခြားလူတစ်ယောက်ယောက်ဆီက အာရုံစိုက်မှုကို လိုချင်တယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီလူကို ပြန်ပြီးလျစ်လျူရှုဖို့ မမေ့ပါနဲ့တဲ့။ အဲ့ဒါကြောင့် ရဲရဲကြီးသာလုပ်ကြည့်။ တစ်ချိန်လုံးလိုက်ကြည့်၊ လိုအပ်တာတွေ ဖြည့်ဆည်းပေးနေရင်းနဲ့မှ Crush ရဲ့စိတ်ထဲမှာ ဒီတစ်ယောက် ဘာဖြစ်သွားတာလဲဟဆိုပြီး ဖြစ်အောင် လျစ်လျူရှုကြည့်လိုက်။ ပြီးရင် သူ့စိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့လျစ်လျူရှုမှုက မသိမသာစိုးမိုးပြီး သူ့အတွေးထဲမှာ ကိုယ်ကရောက်ရှိနေဦးမှာအသေအချာပဲ။ ဒါပေမယ့် အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါလည်း ကြည့်ဦးနော်။ တော်ကြာ ကိုယ့်ဘက်ကလျစ်လျူရှုလေ၊ ဟိုကပျော်လေ၊ မျက်ဖြူဆိုက်လေ၊ ဆရာကြိုက်လေဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ပါ။
၅။ ကိုယ်ကဘဝကို အကောင်းဆုံးနေထိုင်နေတယ်ဆိုတာကို ပြသလိုက်ပါဦး။
ကိုယ်က ကိုယ့်ဘဝကို ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ အကောင်းဆုံးဖြတ်သန်းပြနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း သူတို့မြင်ပါစေဦး။ ဒီလူက လူတစ်ယောက်တည်းအတွက် ဘဝကိုနစ်မျောခံနေပါလားဆိုတာမျိုးကို Crush ခံလူတန်းစားတွေက တွေးတတ်ပါသေးတယ်။ ဒီတော့ သူ့အကြိုက် အလိုက်ဆောင်ဖို့ပဲ မတွေးပါနဲ့။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်၊ မုန့်သွားစား၊ ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီး Facebook ပေါ်တင်။ Crush ကလည်း ဒီပုံတွေကိုမြင်ရင် တစ်မျိုးတစ်ဖုံခံစားနေရမှာပဲ။ ခုနကပြောခဲ့သလို လျစ်လျူရှုခြင်းအခြေခံပေါ့။ ဒီတစ်ယောက် ငါမရှိလည်း ဖြစ်နေတာလား၊ ငါ့ကိုတကယ်ရော စိတ်ဝင်စားရဲ့လားလို့ တွေးနေမှာပဲ။ အဲ့ဒါဆိုရင်ပဲ ကိုယ်က သူ့ကို အိပ်မရအောင် စိုးမိုးနိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်တောင် ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမှာ။
ကဲ …. အပေါင်းအသင်းရောင်းရင်းတို့ရေ။ Crush ဆိုတာမျိုးက အင်မတန်မှ ထူးခြားဆန်းကြယ်တဲ့ လူတန်းစားတစ်မျိုးပဲမဟုတ်ပါလား။ တစ်ယောက်ယောက်က သူတို့ကို Crush နေပြီဆိုတာနဲ့ သူတို့က ချေမိုးခြင်း အတတ်ပညာကိုမသင်ဘဲ တတ်မြောက်သွားလေ့ရှိပါတယ်။ အခုပြောပြပေးထားတဲ့ နည်းလမ်းတွေက အကောင်းဆုံးထဲကမှ အကောင်းဆုံးဆိုတာတွေကို ရွေးထုတ်ပေးထားတာပါ။ Crush ရဲ့ချေမိုးခံရခြင်းကနေ ကင်းဝေးကြပါစေနော်….။
Source: goodyfeed, relationshiptips